Iqela lethu-Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
Unyaka ka-2015, uGqr. Shi Changqing wazibandakanya nenkampani, waseka istudiyo sokuvelisa izinto ezintsha, wakhokela iqela le-R & D lenkampani, waphuhlisa iiprojekthi ezininzi eziphambili kwaye wafaka izicelo zamalungelo awodwa omenzi wechiza, nto leyo eye yazisa amathuba amatsha ophuhliso lwenkampani.
Ukuzibandakanya kwi-R & D yoshishino lweekhemikhali iminyaka eyi-13, ilungile kuphuhliso lobugcisa be-API intermediates kunye neemveliso ze-heterocyclic.t.
Emva kokuphumelela kwiYunivesithi, uye wabandakanyeka kuphando kunye nophuhliso lweemveliso ze-amino acid kwinkampani yethu, kunye neemveliso ezintsha ezingaphezu kwe-10 eziphuhliswa minyaka yonke.
Ukuzibandakanya kuphando kunye nophuhliso amino acid iimveliso series iminyaka engaphezu kwama-20, uqhelene iipropati, iimpawu kunye nexabiso lemarike yazo zonke iimveliso amino acid, kunye nenani leeprojekthi ezintsha oovimba yafikelela amashumi.
Uzibandakanye nomsebenzi wokuvavanya iminyaka engaphezu kwama-35, waqokelela amava ovavanyo atyebileyo.Kwaye inamandla okuphuhlisa nokuqinisekisa iindlela zokubona i-amino acid, enoxanduva lolawulo lomgangatho wenkampani.
Usekela umphathi wesebe lokuhlola umgangatho, ngaphezu kweminyaka emi-5 yomsebenzi wokuvavanya kwinkampani.
Abahlalutyi bazo zonke iingxelo kwisebe lokuhlola umgangatho banomoya wokusebenza ngenyameko kunye nophando olukhethekileyo.
Yiba noxanduva lokufayilisha kunye nokuhlenga onke amaxwebhu esebe lokuhlola umgangatho.
Uyinto ephambili yoqeqesho lwesizukulwana esitsha sabasebenzi bovavanyo.
I-Acetyl-L-Leucine, 537-55-3, Pharmaceutical Chemical, I-L-Glutamine Powder, L-Leucine, I-Dl-Pyroglutamic Acid,